Imvelaphi yesiqhelo seWordPress
Yongeza imvelaphi yesiqhelo kwiWordPress 3
NgoLwesihlanu, Julayi 8, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
Kulenyanga .net iphephancwadi ifike ngecandelo elikhulu kwizinto zeWordPress 3. Olunye lweempawu kukukwazi ukutshintsha imvelaphi yakho kumxholo wakho. Ikhowudi ilula ngokwenene. Kwifayile yakho yemisebenzi.php, yongeza lo mgca ulandelayo:
Ukuba umxholo wakho awunayo imixholo yefayile yefayile, yongeza nje enye! Yifayile yomxholo ongagqibekanga oya kuthi u-WordPress ubandakanye ngokuzenzekelayo. Iziphumo ezigqityiweyo kukuba ngoku unokukhetha imenyu yangasemva kwicandelo leNkangeleko yolawulo:
WOT ludumo lwakho?